China Summer Custom Travel Wash Bags With Logo Folding Portable Cosmetic Bag Manufacturers and Suppliers | Tongxing
Akpa asa njem omenala n'oge okpomọkụ nke nwere Logo mpịachi obere akpa ịchọ mma
Size: Ihe dịka 24.5 * 49 cm, ma ọ bụ ahaziri
Agba: Pink, Grey, Orange, Blue, Green, Black, ma ọ bụ ndị ọzọ
1.Travel Must Haves & Onyinye mara mma - Onye ọ bụla n'ime obere akpa ịchọ mma a nwere agba dị egwu, dị ka ngwa njem ọ ga-abụ nnukwu onyinye maka ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ.
2.GREAT maka ogologo njem-Ọ dị mma maka ezumike ogologo ụbọchị 5-15, njem azụmahịa, ezumike izu ụka ezinụlọ, na nhazi tebụl mgbakwasa. Akpa etemeete buru ibu mana enwere ike ibuba ya na akpa ebu n'ihe dị sentimita iri abụọ.
3. Ọtụtụ Oghere Nchekwa:Nke a bụ ihe dị mma nke ukwuu, nke dị mfe iburu ma na-echekwa ohere. Nke a na-eme ka akpa na-eme ka ọ dị mma iji jide ihe ịchọ mma gị kwa ụbọchị, dị ka lipstick, egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, brushes etemeete, eyeshadow na ihe ndị ọzọ. Na-eme ka ihe gị niile mara mma na nhazi ka ị ghara ịga na-achọ ihe niile mgbe niile.
4.Multifunctional etemeete akpa:Akpa ụlọ mposi a abụghị naanị nwere ike ịchekwa ihe ịchọ mma gị, kamakwa ọla, ngwa eletrọnịkị, igwefoto, mmanụ dị mkpa, ụlọ mposi, ihe a na-akpụ isi, ihe bara uru na ihe ndị ọzọ. Ị nwere ike weta ihe ịchọ mma gị n'ebe ọ bụla.
N'ihi ọkụ dị iche iche na nleba anya, agba nwere ike ịdị iche na foto a, yana nha +/- 1 cm ga-ahapụ ya.
Nabata na omenala akpa ịchọ mma nke gị, ajụjụ ọ bụla biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị nwere obi ụtọ inyere aka, ọtụtụ ekele.
Nke gara aga: Ọnụ ego efu China Obere Agbamakwụkwọ ọla obere akpa Velvet akwa Drawstring akpa nwere mbipụta Logo
Osote: Ọnụ ahịa asọmpi maka akpa ịzụ ahịa China PP nke anaghị kpara akpa maka iji nkwalite
akpa ịchọ mma nwere akara ngosi
akpa ịchọ mma omenala
akpa njem njem
mpịachi ịchọ mma akpa
Njem ịchọ mma akpa
Womenmụ nwanyị sexy ga-enwerịrị ihe ịchọ mma corduroy okomoko…
Nkecha na ọmarịcha ebe nchekwa Slim Zipper Cosmet...
Arọ etemeete Doraemon Ejiji PU Pensụl ...
Ụmụ nwanyị na-adịgide adịgide dị arọ nke owu akwa akwa ihe ọchị...
Ahapụrụ PVC ịchọ mma akpa onye na-emepụta ihe ...
Omenala Logo Ejiji 2019 ịchọ mma N'ogbe Wo...